top 5 Saldhigyada Tareenka ee ugu mashquulka badan Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > top 5 Saldhigyada Tareenka ee ugu mashquulka badan Yurub
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 01/04/2021)
Safarka tareenka waa habka ugu caansan safraya Europe. Sidaa darteed, qaar ka mid ah saldhigyada tareenka ee ugu mashquulka badan adduunka waxay ku yaalliin Yurub iyo waqtiyada qaarkood, dunida oo dhan.
In kasta oo ay dadku buuq badani ku jireen saacadihii ugu sarreeyay, dusha sare 5 Saldhigyada tareenka ee ugu mashquulka badan Yurub waxaa loogu talagalay inay bixiyaan wax kasta oo aad ugu baahan karto safarkaaga.
Raac safarkayaga Yurub oo soo hel saldhigga tareenka ee ugu badan Yurub. Waxaad qarka u saaran tahay inaad ogaato halkaad ka dhagaysan karto Vivaldi iyo saldhiga tareenka ee aad ku sugi karto webiga dhiniciisa tareenka ee tagaya Talyaaniga.
1. Gare Du Nord Station tareenka, Paris
Gare du Nord ee Paris (Eray Gare oo macnihiisu yahay Faransiis waa Saldhigga Tareenka, Nord ee Faransiiska ayaa ah Waqooyiga) waa xarunta tareenka ee ugu mashquulka badan Yurub. Way u dhawdahay 700,000 rakaabka maalin walba dhaafa xarunta tareenka. Saldhigga tareenka wuxuu ku yaal meel u dhow 10th arrondissement ee woqooyiga Paris, sidaa darteed badankood rakaabku waa Parisians. Kaliya 3% Rakaabka rakaabka ah waa dalxiisayaal yimaada ama yimaada UK Eurostar train.
Saldhigga tareenka ee ugu mashquulka badan Yurub ayaa laga dhex dhisay 3 sano, inta u dhaxaysa 1861 iyo 1864. Qaab-dhismeedka loogu talagalay 9 taariikho la yaab leh oo qurxiya xarunta tareenka gudaha iyo 23 taalladaha waxay ku qurxiyaan wajiga saldhiga. Astaamaha waxay matalaan magaalooyinka waaweyn ee Yurub ee tareenka uu ku xirayo Paris.
Xarunta tareenka ee cajiibka ah ayaa la balaariyey laba jeer sanadihii la soo dhaafay waxaana la filayaa in mar kale la balaariyo iyada oo ay ugu wacan tahay tirada sii kordhaysa ee rakaabka iyo khadka tareenka.
Paris-Nord waa xarunta tareenka ee loogu safro woqooyiga Faransiiska iyo meelaha safarka ee caalamiga ah, tusaale ahaan, Germany, London, iyo Amsterdam. Sayidka, Saldhiggan tareenka ee mashquulka ah ayaa ku siin doona dhammaan waxyaabaha muhiimka u ah safarkaaga ciidaha France. Dukaamo ayaa leh, xarun macluumaad dalxiis, dukaamada, iyo sanduuqyada boorsooyinka haddii aad rabto inaad si raaxo leh uga baaraandegto Paris saacado yar ka hor inta uusan tareenkaagu ka bixin.
2. Xarunta dhexe ee Hamburg, Germany
In ka badan 500,000 rakaabku waxay marayaan Hamburg Hbf (Hbf waa toobiye loo maro Hauptbahnhof oo loo turjumay xarunta dhexe) xarunta tareenka ee Jarmalka. Sayidka, Waa xarunta labaad ee tareenka ugu mashquulka badan Yurub.
Xarunta tareenka ayaa laga dhex dhisay 4 sano iyo naqshadeeyeyaasha Heinrich Reinhardt iyo Georg Subenguth ayaa naqshadeeyay. Xarunta tareenka ayaa laga furay 1906 iyo gudaha 1991 xarun wax lagu iibsado ayaa lagu daray buundada waqooyiga, halkaas oo ay ku jiraan maqaaxiyo, dukaanno, farmashiye, iyo xarumaha adeega.
Hadaad qorsheynaysid safarka tareenka ilaa Jarmalka, waad ku raaxeysan kartaa muusikada qadiimiga ah. Sidaas, inta aad ka adeeganeyso qalabka fadhiga daqiiqada ugu dambeysa, waxyaabaha daruuriga u ah safarka, iyo qabashada qaniinyada si loo cuno, aad ayaa lagugu soo dhoweynayaa inaad dhageysato oo aad ku raaxaysato afarta xilli ee Vivaldi.
3. Xarunta Tareenka Bartamaha ee Zurich HB, Switzerland
Saldhigga tareenka ugu weyn Switzerland wuxuu ku yaal Zurich. The Zurich HB (HB waa sida Hbf oo macnaheedu waa Hauptbahnhof = Saldhig Dhexe) Saldhigga tareenka waa mid ka mid ah saldhigyada tareenka ee ugu mashquulka badan Yurub. Saldhigga tareenka ee mashquulka badan ee Switzerland wuxuu isku xiraa Switzerland iyo magaalooyinka dalka oo dhan iyo waddamada deriska ah. Waxaa jira 13 aaladaha iyo 2,915 tareeno ayaa tagaya Jarmalka, Italy, France, iyo maalin walba Austria. Sidaa darteed, Xarunta tareenka ee Zurich waa mid ka mid ah saldhigyada tareenka ugu badan adduunka.
Waxyaabaha kale ee ka dhigaya rugtan tareenka kan ugu mashquulka badan Yurub waa in runti ay jirto mashquul & nolol buuq leh oo ka dhexeeysa saldhiga. Tusaale ahaan, waxay kuxirantahay waqtiga safarkaaga, waad awoodaa ku raaxayso suuqyada Kirismaska iyo bandhigyada waddooyinka.
Saldhigga tareenka ee Zurich wuxuu ku yaal Old Town ee Zurich. The Wabiga Sihl wuxuu maraa saldhiga, tan macnaheedu waa inay jiraan wadooyin tareeno oo kor iyo hoos ka jira.
Sidoo kale, xarunta tareenka ee Zurich waxay Switzerland ku xiraa Faransiiska, Germany, Italy, Czech Republic, iyo Austria.
Si la mid ah xarumaha kale ee tareenada caalamiga ee liiskayaga ku jira, waxaa jira a xafiiska sarrifka lacagaha, xafiiska tigidhada, kaydinta shandadaha, xarunta macluumaadka dalxiiska, iyo Wi-Fi internet ee xarunta tareenka ee Zurich. Sidaas, haddiiba aad ilowdid inaad wax u xiristo fasaxa Switzerland, walwal kama qabin maxaa yeelay saldhigga waxaad ka heli kartaa wax walba.
4. Saldhigga Tareenka Rome Termini, Italy
Saldhigga tareenka Rome wuxuu ku yaal meel sare 5 Saldhigyada tareenka ee ugu mashquulka badan qaarada Yurub taas oo ay ugu wacan tahay tirada sanadlaha ah ee rakaabka ah ee ay u adeegto. Ilaa 150 milyan rakaab ah ayaa yimaada oo ka taga xarunta tareenka ee mashquulka ah sanad walba.
Saldhigga tareenka ee Rome wuxuu isku xiraa Rome Termini magaalooyinka kale ee Talyaaniga Trenitalia. Intaa waxaa dheer, Tareenka tareenka wuxuu ku xiraa Talyaaniga waddamada deriska ah 29 aaladaha. Tusaale ahaan, kana yimid Rome Termini, Waxaad u safri kartaa Geneva ee Switzerland, Munich ee Jarmalka, iyo Vienna dalka Austria.
Saldhigga tareenka ee Rome wuxuu leeyahay wax kasta oo socdaalku u baahan karo si uu ugu tababaro safarka Yurub ama Talyaaniga. Sidaa darteed, hoolka laga soo galo, waxaad ka heli doontaa xafiiska sarifka lacagaha, maqaayado, adeegyada taksi, iyo xarumaha boorsooyinka. Wax walba waxaa loo qorsheeyay oo loo habeeyay inay safarkaaga u dhigaan sidii ugu macquulsan uguna macquulsan.
5. Xarunta tareenka ee Hauptbahnhof, Germany
Maanta waxaa jira 32 dhufto ka mid ah saldhigyada tareenka ee ugu mashquulka badan Yurub. Intaa waxaa dheer, waxaa jira adeegyo tareen oo ah InterCity iyo EuroCity inta badan Jarmalka, iyo Italy, France, Switzerland, iyo Austria. Laga soo bilaabo xarunta tareenka ee Munchen Hauptbahnhof waxaad u safri kartaa Berlin, Frankfurt, Vienna ee Jarmalka ama tareen u raac Venice iyo Rome ee Talyaaniga, Paris, iyo Zurich.
Qiyaastii 127 milyan oo rakaab ah ayaa booqda xarunta tareenka ee Munich sanadkii. Tiradan aadka u wanaagsan waxay ka dhigeysaa saldhigga mid ka mid ah xarumaha tareenka ugu mashquulka badan Yurub.
Si la mid ah saldhigyada kale ee tareenka ee kor ku xusan, xarunta tareenka ee Munich waxay bixisaa xarumo badan iyo adeegyo loogu talagalay dadka safarka ah. Tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa dukaamada cuntada, dukaamada hadiyadaha, iyo xitaa caruur & Matxafka dhalinyarada ee xarunta tareenka.
Dibadda xarunta, waxaad ka heli doontaa metrooga dhulka hoostiisa mara ee 'U-Bahn', adeegyada taksi, iyo khadadka taraamka ee kugu qaadi doona meelkasta oo Munich ah.
Haddii aad raadineyso tareenka gobolka ama kan caalamiga ah si aad ugu safarto Yurub oo dhan, dalbo tigidhkaaga tareenka Save A tareenka. Waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawino helitaanka ikhtiyaarada tigidhada ugu fiican ee laga heli karo qiimaha ugu wanaagsan ee suuragalka ah.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “top 5 Saldhigyada Tareenka ee ugu mashquulka badan Yurub” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbusiest-train-stations-europe%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Goobaha ugu Adkaa TrainStation traintravelaustria traintravelfrance traintravelgermany